WQGS biyaha Bulaacadda saar - Shiinaha Shanghai SOG Bamka
taxane WQGS iyo GWQ non-xidhmin bambooyin motor biyaha hoostooda waxaa si adag loogu talagalay, macmalay iyo tijaabiyo sida ay heerarka qaranka qaraabo, iyagu waa dabaqi karo biyaha qashinka ganacsiga, biyaha qashinka maalinlaha ah, nidaamka bullaacadaha oo biyo ah qashinka magaalada.
Heerkulka 1. daarmayaay'e: 0-40 ℃
2. heerkulka dareere ah ugu + 40 ℃
3. Heerka PH ka 4-10
4. cufnaanta dareere ugu badan 1.2 * 10kg / m³
5. inta jeer Power waa 50Hz. danab magaceed waa 220VAC wajiga kaliya
Oo 380VAC saddex waji oo kala duwan oo ka soo -100% ilaa 10%.
6. Immersion qoto dheer ka 0.5m-5
taxane WQGS non-xidhmin biyaha hoostooda bambooyin motor waa dabaqi karo dheecaan biyaha qashinka si dhab ah ku nijaasoobay warshadaha iyo goobaha ganacsiga, saldhigga dheecaan wasakhda in meesha la degan yahay, nidaamka bullaacadaha ee warshad daaweynta biyaha qashinka magaalada, dheecaan saldhigga difaaca madaniga ah, sahayda biyaha ee qasabada warshad biyaha, dheecaan wasakhda ee isbitaalada iyo hotels, goobaha dhismaha mashaariicda degmada, sahaminta, miinooyinka, pool methane miyiga, waraabka iwm beeraha Si samatabbixi biyaha qashinka iyo sunta ay ku jiraan dhagaxyada, iyo sidoo kale biyo nadiif ah iyo ruuxaanta xoqe.
1.Insulation fasalka: F
biyo u adkaysta 2.Beerta impeller of QT 450-10 wax.
3.Stainless kordhin usheeda dhexe bir, carbide -sides double quwad farsamo.
impeller 4.Double channel, awoodda socodka wanaagsan, waxqabadka Haydarooliga fiican.
Ikhtiyaar Available on Request
danab kale ama inta jeer waa 60HZ
Tirada nooca flow madaxa Haydarooliga RPM danab Power Dhererka
WQGS (GWQ) Taxanaha:
Rakibaadda sawir waji leh ee WQGS (GWQ) taxane non-dhow go'an bamka motor biyaha hoostooda.
Rakibaadda, Operation iyo Dayactirka Tilmaamo:
● Waa mamnuuc in jiid xarkaha xoog in la rakibo iyo saarista bamka korontada si looga fogaado in fiilooyin jabiyay iyo delinking wadajir ah taas oo keeni si caadi ah failure hawlgalka iyo xataa gubasho,
● Fadlan hubi sax ah oo la isku halayn karo earthing cable in la rakibo ee bamka korontada. Waa mamnuuc aadanaha ama xoolaha lagu waajaho meelaha biyaha hawl ama taabto bamka korontada marka lagu shaqeeyo. In si loo yareeyo halista shoog koronto, waxa kaliya ee la xiran karaa fur earthing;
● hawlgalka dollar waa xaaraan,
● The fiilooyinka la xidhiidha bambooyin waa in aanay noqon wax ka yar 1.2 times of degaanka Bamka korontada,
● Bamka korontada waa in la dhejiyeen rakibo. Laakiin fiilooyinka aan la carabka ku adkeeyay karo ama si wadajir ah ula bamka korontada isku shaandheyn lahaa mar haddii la bilaabay;
● Marka bamka ma keento biyaha ee howlgalka, bamka korontada waa in la hubiyaa for wareeg kasta oo cagsi ah ama tubada jeeg afka outlet biyaha la fiiriyaa hawada kasta haraaga ah waa;
● Phase-ka-waji iyo iska caabin qaraabo dhulka-to-dhulka ningax of motor ee bamka korontada waa in la kormeera si joogto ah la iska caabin ah oo aan ka yareyn 2MΩ. Haddii kale, qalabka waa in la disassembled kormeerka iyo dayactirka;
● Ka dib markii qeybtii sano ah hawlgalka caadiga ah hoos xaaladaha shaqada ku xusan, bamka korontada waa in la hubiyaa xaalad dhagixiina way qolka saliid. Marka saliidda waxaa emulsified ama sedimented biyo soo baxa, 10 # saliidda mashiinka iyo qaybo ka mid seal farsamo waa in la bedelay hab wakhti;
● shaqo dayactir Mid ka mid ah oo baaxad weyn oo waa in la qabtaa hawlgal caadi ah ka dib markii muddo hal sano ah, qaybo ka mid xirto waa in la bedelay, qaybood ah waa in la kormeera iyo labeen waa in la dhamaystiraa oo bedelay si loo hubiyo in sifaynta fiican in hawlgalka caadiga ah;
● Fadlan nadiifiso bamka korontada iyo tirtiri soo baxay kuul haddii aan la isticmaalayn.
Cillad Falanqaynta iyo Tirtirida
Cillad falanqaynta Sababta hababka Tirtiridda
socodka ku filnayn ama aan biyo lahayn item daab 1.mistaken qabsato xigxiga kasta oo laba waji ah wareeggeedii awoodda
2.openness oo dhameystiran waalka outlet baadho waalka
hawada 3.left in tuubooyinka u dhexeeya waalka iyo bamka ka dhigaysa in ay adag tahay in la furo waalka dheecaan hawada ee tuubooyinka
4.too xawaaraha wareeg hooseeyo hubi korontada for degree danab ku
seal 5.excessive giraanta abrasion bedelo
cufnaanta 6.high ama ku nafwaayay in dareeraha beddelo cufnaanta iyo ku nafwaayay ee dareeraha ah
7. biibiile oo xannibaad daab baabi'iyo caqabado ah ee qasabadaha iyo garbaha
hawlgalka bamka korontada deganayn dheelitir la'aanta 1.blade bedelo ama shaqeeyaan miisaamid wheel
dhaawac 2.bearing bedelo
hawlgalka 3.overload qabsato waalka si looga fogaado dollar bamka korontada
4.sliding rakibaadda rakibaadda mar kale
caabin ningax hooseeyo 1.leakage in dhamaadka xarkaha ee cable oo awood wareeggeedii ah dhejiyo oo riix nuts xidh
fiilooyin dhaawac 2cable ama biyo galaya madax bedelo
abrasion seal 3.mechanical bedelo
giraanta seal gabowga iyo failure 4.O-qaabeeya bedelo
hadda xad-dhaaf ah 1.low danab shaqeeya qabsato danab shaqeeya
xannibaad 2.blade ama xayiran-up caqabadaha nadiif ah ee qasabadaha iyo dareere
cufnaanta 3.high ama ku nafwaayay in dareeraha beddelo cufnaanta iyo ku nafwaayay ee dareeraha ah
furfurnaanta waalka 4.excessive qabsato furfurnaanta waalka
xidhmin Free Bulaacadda bamka
No saar Bulaacadda Kadhoofaan
Non-ka xanibeen saar Bulaacadda
qeybiye saar Bulaacadda
Bulaacadda Water saar
Furimaha biyaha saar Bulaacadda
Saar Bulaacadda biyaha
Wqk Bulaacadda saar